ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Xiaomi Redmi Note2ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်သည် Androidsis
[UPDATED] ယခုတွင်သင်သည်ယူရို ၁၅၈ အတွက် ၃၂ ​​Gb Xiaomi Redmi Note2ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီးပထမယူနစ် ၁၀၀ ကိုကန့်သတ်ထားသောကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည်။
Francisco Ruiz | | Xiaomi က
Phablet အမျိုးအစားမျက်နှာပြင်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအရည်အသွေးရှိသော Android terminal ကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ အကယ်၍ အဖြေကဟုတ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည်ကိုသင့်အားအသိပေးလိုပါသည် Xiaomi Redmi Note232 Gb ကိုဝယ်ပါ ထက်နည်း 190 ယူရိုသည်, အထူးသဖွင့်အဘို့ 186,94 ယူရို သင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်နှင့်တရားဝင်အာမခံ၏တစ်နှစ်။ ယခုရောင်းရန် 158,32 ယူရိုသာ ကန့်သတ်ထားသည် ရောင်းသည့်ပထမယူနစ် ၁၀၀.
ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက်၏အကြောင်းရင်းများသည်တစ်နှစ်တာ၏မျှော်လင့်ထားသည့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုနှင့်၎င်း၏ပထမဆုံးမူကွဲကို ဆက်လက်၍ တိုးတက်စေခြင်း Xiaomi က Redmi Note ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရောင်းလို့မရတဲ့အရောင်းအဝယ်အောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလူတွေဆီကကြွေးတင်နေတယ် အမြဲတမ်းဝယ်တရုတ်နိုင်ငံ၏မြို့ကြီးဖြစ်သောနိုင်ငံမှတင်ပို့သည့် Android terminal များကိုအွန်လိုင်းမှဝယ်ယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးစတိုးဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည် Xiaomi Redmi Note2နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ သေချာသည်မှာအလယ်အလတ်တန်းစား Android အကွာအဝေးတွင်ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
1 Xiaomi Redmi Note2၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
2 သူကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် Xiaomi Redmi Note2၏ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Xiaomi Redmi Note2၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
ပုံစံ Redmi Note 2
operating system Miui V5.1 စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android7Lollipop
ဖန်သားပြင် 5'5 "FullHD 1920 x 1080n pixels နှင့်တစ်လက်မလျှင် 400 dpi ရှိ pixel သိပ်သည်းဆ
Processor ကို Helio X10 Octa Core ကို 2'2 Ghz နှင့် 64 Bit နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်
GPU ကို ပါဝါ VR G6200
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 16 နှင့် 32 Gb MicroSD အထိ 32 Gb အထိထောက်ပံ့မှုရှိသည်
နောက်ကင်မရာ Samsung မှထုတ်လုပ်ပြီး FlashLED ဖြင့် resolution 13 mpx ရှိသည်
ဆက်သွယ်မှု DualSIM (micro SIM) - GSM + WCDMA + FDD-LTE ခလုတ်များ - 2G: GSM 900/1800 / 1900MHz; 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz; 4G: FDD-LTE 1800/2100 / 2600MHz - ဝိုင်ဖိုင် - Bluetooth ၄.၀ - GPS / A-GPS / GLONASS
အခြားသူများကို Gravity sensor - Proximity sensor - Gyroscope - ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အာရုံခံကိရိယာ - ဒီဂျစ်တယ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်
ဘက်ထရီ 3060 mAh လီသီယမ်အိုင်းယွန်း
ရှုထောင့် 152 76 8.25 မီလီမီတာ
စြေး 153 Gb model အတွက် ၁၅၃'၃၄ ယူရို y 186 Gb model အတွက် ၁၈၆'၉၄ ယူရို
သူကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် Xiaomi Redmi Note2၏ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
စက္ကူတွင်, ဒီအသစ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ Xiaomi ကမှတ်ချက် Redmi2Mediatek ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြသင့်တယ် MTK Helio X10 သူတို့နှင့်အတူ ရှစ်ခုနှင့်၎င်း၏ 2,2 Ghz အများဆုံးနာရီမြန်နှုန်း ၎င်းသည်၎င်းကို Android အလယ်အလတ်တန်းစားရှိစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအခါငါတို့နှင့်အတူအကောင်းတစ် ဦး ပေါင်းစပ်ရှိသည် PowerVR G6200 GPU ကို ဒါကကျွန်တော်တို့ကို Play Store မှာအလိုအပ်ဆုံးဂိမ်းများကိုပြစရာမလိုဘဲလှိမ့်နိုင်ခွင့်ပေးသည် 64-bit နည်းပညာနှင့်၎င်း၏2Gb RAM သည်သူတို့က၎င်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းမှာငွေတန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်မြင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
ငါတို့သည်လည်းသင်၏ထားတဲ့အတွက် Android terminal ကိုရှာလျှင် ကင်မရာများ, ရှေ့နှင့်နောက်ဘက်သို့မဟုတ်အဓိကနှစ် ဦး စလုံးကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း high-end Android နှင့်ဆင်တူအရည်အသွေးဒါဆိုငါတို့စျေးကွက်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး terminal ကိုတွေ့နေရတယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
သူကိုယ်တိုင်၎င်းကိုစမ်းသပ်ပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ပေးရန်နှင့်ကိုယ်တိုင်လက်ဗဟုသုတရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ Xiaomi Redmi Note2အသစ်ကိုသင်ဘယ်လိုမှတ်မိလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » [UPDATED] ယခုတွင်သင်သည်ယူရို ၁၅၈ အတွက် ၃၂ ​​Gb Xiaomi Redmi Note2ကိုဝယ်ယူနိုင်ပြီးပထမယူနစ် ၁၀၀ ကိုကန့်သတ်ထားသောကမ်းလှမ်းချက်ရှိသည်။
Estebantet အက်စ်Rosé ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ, ငါမိသားစုများအတွက်နှစ်ခုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါ "RedMi32GB" ကုဒ်ကိုလည်းသုံးပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ယူရို ၁၇၀ နဲ့အာမခံထားတဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ယူရိုနည်းနည်းသက်သာတဲ့အဖြူရောင်မော်ဒယ်) နဲ့ကုန်ကျတယ်။ ၁၇ ရက်မှ စ၍ ရောင်းချမည်မဟုတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ (ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းကို 170-17-09 အထိ) ။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် Mi3 ကိုတစ်နှစ်ထားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ပါသည်။ ဒါပိုကောင်းလား?
Estebantet S. Roséထံပြန်သွားပါ
ငါက MundoPDA မှာဝယ်, ထိုသို့နက်ဖြန်နေ့၌ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အာမခံချက်ဖြင့်
Google Pay သည် Android Pay အတွက်ရိုးရှင်းသော Wallet အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်